Iqopha nesihlabani somculi waseMelika iMiCasa | IOL Isolezwe
Iqopha nesihlabani somculi waseMelika iMiCasa
Isolezwe / 24 August 2012, 12:24pm /
IQEMBU le-house iMiCasa lisestudiyo lihlanganisa ingoma nesihlabani seR&B saseMelika uJohn Legend. Lokhu kushiwo nguJ-Something ophakathi nendawo kanti amanye amalungu nguMo-T (kwesobunxele) noDr Duda
100812. Multiple Grammy award winning artist John Legend perform in a sold-out show at the Sandton Convention Centre in commemoration of Women's Day. 535 Picture: Dumisani Sibeko
LIYAFEZEKA iphupho leqembu lomculo we-house, iMiCasa, lokwaziwa phesheya kwezilwandle njengoba lisestudiyo liqopha iculo nesihlabani se-R&B saseMelika uJohn Legend.
IMiCasa ehlanganiswe nguMo-T, J-Something noDr Duda, imatasa ihlanganisa iculo nalo mculi wodumo lwezingoma ezithi Ordinary People nethi Used To Love You.
Phambilini uMo-T watshela Isolezwe ukuthi bangahle bahlanganise ingoma nalo mculi ogama lakhe nguJohn Roger Stephens kodwa kuleli sonto uJ-Something ukuqinisekisile ukuthi sebeyasebenzisana nalo mculi oyintandokazi kwabesifazane.
“Kumanje sisestudiyo siyaqopha. Into eyenzekayo wukuthi thina leli culo sizoliqopha singapha eMzansi kuthi uJohn aqophe eseMelika. Uzothi uma eseqedile bese eyasithumelela. Sisebenzisa indlela entsha yokwenza izinto manje futhi enobuchwepheshe,” kusho uJ-Something.
Le nsizwa yomlungu abesifazane abazifelayo ngayo, ithe kuzobathatha cishe izinyanga ezine ukuthi baliqede leli culo.
“UJohn Legend ubesenomkhuhlane kancane kodwa ngiyacabanga ukuthi uyalulama manje futhi usalalela i-albhamu yethu ukuze abe nesithombe sokuthi senza umculo okanjani bese ebhala iculo elizohambisana nesitayela sethu,” kuchaza uJ-Something.
Uveze ukuthi bahlose ukulifaka kwi-albhamu yabo entsha ezophuma ngasekuqaleni konyaka ozayo.
“Ngekota yokuqala sibheke ukuthi sibe sestudiyo sihlanganise i-albhamu entsha. Ngaphandle kukaJohn Legend kukhona abanye abaculi esizimisele ngokusebenzisana nabo okubalwa kubona owakwelinye izwe lase-Afrika neqembu lakuleli esicabanga ukuthi lenza kahle kakhulu. Okwamanje angifuni ukudalula amagama abo,” kusho uJ-Something.
UJohn Legend usanda kuhambela kuleli lapho ayenandisa emcimbini wabesifazane eSandton Convention Centre.